Free Safety Check - Mitsubishi Motors Myanmar
Mitsubishi Motors ကနေ Customer များကို အချိန်တိုင်း ဂရုစိုက်မှုပေးနေပါတယ်. မိုးရာသီမောင်းနှင်မယ့်ကားတွေ အန္တရာယ်ကင်းစေဖို့အတွက် မည်သည့်အိမ်စီးကားအမျုုိးအစားကိုမဆို Mitsubishi Motors က Free Safety Check ကိုပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။ Free Safety Check အစီအစဉ်မှာတော့ Battery, Wiper, Ventilation System တာယာ နဲ့ ဘရိတ်တွေကို အခမဲ့စစ်ဆေးပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိပဲဆိုတော့ အမြန်ဆုံးလာရောက်စစ်ဆေးဖို့တော့ အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင့်…
မိုးလည်းကျတော့မယ်.. မိုးတွင်းမှာ မသွားမဖြစ်သွားရမယ့် အလုပ်ကိစ္စတွေကလည်း ရှိနေတယ်. မိုးတွင်း အမြဲလိုလို ရေကြီးရေလျှံတတ်တဲ့ လမ်းတွေ၊ မိုးရေနဲ့ စွတ်စိုချောနေတဲ့ လမ်းတွေမှာ အန္တရာယ်ကင်းစွာနဲ့ သန့်ရှင်းစွာ အနံ့ကင်းကင်းဖြတ်သန်းမောင်းနှင်နိုင်ဖို့အတွက် မိမိကားကို အမြဲစစ်ဆေးသင့်တဲ့ ၁၀ ချက်ကို အကြံပြုပေးပါရစေ။
၁။ ကားတာယာများကို စစ်ဆေးပါ။
ကား အက်ဆီးဒင့်အများစုမှာ တာယာတွေကြောင့်ဆိုတာက အများဆုံးအချက်ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိုးရာသီကျပြီဆိုရင် တာယာအဟောင်းတွေကို လဲလှယ်ပြီး ဘီးအလိုင်းမင့်လည်း ချိန်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၂။ ဘရိတ်ဆီ လဲလှယ်ပေးပါ။
မိုးရာသီမှာ ဘရိတ်ဆီကို ပုံမှန် လဲလှယ်ပေးဖို့ကလည်း အရေးကြီးတဲ့အချက်တခုပါပဲ။ Brake Drums တွေကို အမြဲစစ်ဆေးဖို့လိုပြီးတော့ မိုးရွာနေတဲ့အချိန် မမောင်းခင်မှာ သင့်ကားဘရိတ်ကို တစ်ချက်စစ်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။
၃။ ကား Wiper တွေကို အမြဲသန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။
မိုးအရမ်းသည်းတဲ့နေ့တွေမှာ မြင်ကွင်းကြည်လင်နေဖို့ Wiper တွေကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ကားရဲ့ အနောက်မြင်ကွင်းတွေဟာလည်း အရေးကြီးလို့ေ နာက်ကြည့်မှန် wiper တွေမပါတဲ့ကားတွေဟာေ ကာင်းမွန်တဲ့ နောက်ကြည့်မှန် Wiper တွေ တပ်ဆင်ဖို့
၄။ ကားအောက်ပိုင်းတွေကိုပါ Wax Coating တင်ပေးပါ။
မိုးတွင်းမှာ ကားအောက်ပိုင်းတွေကို မိုးရေထိတဲ့အခါ ကားအောက်ပိုင်းရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက် မိုးမကျမီ ကားအောက်ပိုင်းတွေကိုလည်း Wax Coating တင်သင့်ပါတယ်။
၅။ ကားမှန်ဆေးတဲ့ ရေတိုင်ကီကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။
မိုးတွင်းမှာ ကားမောင်းတဲ့အခါ ကားမှန်တွေဟာ ရွှံ့တွေဗွက်တွေ အမြဲစင်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကားမှန်ဆေးရေတိုင်ကိီကို သန့်ရှင်းတဲ့ ရေတွေ အမြဲထည့်ထားဖို့လိုအပ်ပြီးရေတိုင်ကီ ရေရှိမရှိကိုလည်း အမြဲ စစ်ဆေးနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၆။ ကားမီးများကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။
မိုးအရမ်းသည်းတဲ့အချိန်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ့်ကားကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေရဖို့အတွက် ကားရဲ့ ရှေ့မီးနောက်မီးအချက်ပြမီးတွေအကုန်လုံးကို အမြဲတမ်း စစ်ဆေးထားပါ။
၇။ ကားအတွက် vacuum cleaner ဒါမှမဟုတ် Dryer တခု
မိုးတွင်းမှာ ရေစိုတတ်တဲ့အတွက် ကားထိုင်ခုံတွေကိုခြောက်အောင် Dryer ဒါမှမဟုတ် ဖုန်စုပ်စက်အသေးလေးတခုကို ကားအတွင်း
၈။ ထိုင်ခုံစွပ်နဲ့ ခြေနင်းအပိုတွေ ဆောင်ထားပါ။
မိုးတွင်းမှာ ကားထိုင်ခုံစွပ်နဲ့ ခြေနင်းတွေဟာ ပျက်စီးညစ်ပတ်နိုင်တဲ့အတွက် ထိုင်ခုံစွပ်နဲ့ခြေနင်းအပိုတွေကို အသင့်ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
၉။ ကားအဲကွန်းကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။
မိုးသည်းတဲ့အချိန်မှာ ကားမှန်မြင်ကွင်းရှင်းပေးနိုင်တဲ့ defog mode ကို နှိပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ ကားအဲကွန်းကို ဖွင့်ထားသင့်ပါတယ်။ မိုးတွင်းမှာ ကားမှန်ရုတ်တရက် ရေငွေ့ရိုက်ပြီး မှှုန်းဝါးသွားတာဟာဖြစ်နေကြပြသနာမို့ ကားအဲကွန်းကို အမြဲစစ်ဆေးထားသင့်ပါတယ်။
၁၀။ ရော်ဘာအဆက်လေးတွေကို အသင့်ဆောင်ထားပါ။
မိုးအရမ်းရွာတဲ့အခြေအနေမှာ မိုးရေတွေဟာ ကားထဲကို မှန်ကဖြစ်စေ တံခါးကဖြစ်စေ စိမ့်ဝင်လာတတ်ကြပါတယ်.. အဲဒီအခါကျရင်တော့ေ ရာ်ဘာပြားလေးတွေနဲ့ ရေစိမ့်တဲ့နေရာကို ကပ်ပြီး ရေစိမ့်မှုကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်…
Yangon Showroom & Service
အမှတ် ၁၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းနှင့် ရွာမကျောင်းလမ်းထောင့်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊
ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း – 09 45 862 3816, 01 514522
Mandalay Service Center
အမှတ် ၆၀၃/A၊ (နဂါးအိမ်ရာဝင်း)၊ စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊
အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေး။ Hotline : 09 259100446